Wamkelekile kwiVsmile Factory-Iindaba-VSmile Co., ltd
Wamkelekile kwiVsmile Factory
Ixesha: 2020-05-08 I ngxelo:66
Wamkelekile to Vsmile Fumdlali!
Ngaba ungathanda ukwazi ukuba zenziwa njani iibhloko zirconia? Masindwendwele umzi-mveliso weVsmile!
Ngoku, siza kutyhila isigqubuthelo esenziwe nge-zirconia block, Ngokukhawuleza khupha incwadi uthathe amanqaku! Ungaphoswa leli thuba!
Okokuqala, inkqubo yeebhloko ze-zirconia yahlulwe yangamanyathelo amathandathu aphambili.
Nanga amanyathelo abo:
2. Ukucofa nokubumba
3. I-CIP (iCodod Isostatic pressing)
4. Ngaphambi kokuntywila
5. Ukwenza imitha
Amagcisa efektri yethu asebenza nzima!
Yenza iimveliso ezifanelekileyo ukunika abathengi bethu amava abhetele, kuba ukuhlangana kunye nokugqitha kulindelo lwaBathengi yinjongo yethu!
Okwesibini, Masifunde ngakumbi malunga nomzi mveliso weVsmile kwividiyo!
Wamkelekile ukukhetha ibhloko lethu le-zirconium, iintlobo ezahlukeneyo zokuhlangabezana neemfuno zakho! Intsapho yeVsmileHappyzir ibandakanya:
A: White Zirconia iibhloko Plus ulwelo Umbala
1. I-VsmileHappyzir HT White 1350MPA ene-37% translucensy, yenzelwe ukujongana, ibhulorho epheleleyo.
2. I-VsmileHappyzir ST White 1200MPA ene-41% ye-translucensy, yenzelwe ukujongana nesithsaba se-Monolithic, ibhulorho epheleleyo.
3. I-VsmileHappyzir UT White 700MPA ene-49% ye-translucensy, yenzelwe i-Anterior, isithsaba se-Monolithic, iiyunithi ezingama-3 zebhulorho.
B: Ibhlokhi yeZirconia ebunjiweyo ene-Vita 16 shades
1. VsmileHappyzir ST Preshaded 1200MPA nge-41% translucensy, yenzelwe ukujongana, isithsaba seMonolithic, ibhulorho epheleleyo. Yonke imibala ye-Vita 16.
2. I-VsmileHappyzir UT igcinwe nge-700MPA nge-49% ye-translucensy, yenzelwe i-Anterior, isithsaba se-Monolithic, iiyunithi ze-Max 3 zebhulorho. Yonke imibala ye-Vita 16.
C: Ibhlokhi yeZirconia e-Multilayer eChongiweyo ene-Vita 16 shades kunye neBleach color
1. I-VsmileHappyzir STML Multilayer 1200MPA ene-41% ye-translucensy, yenzelwe ukujongana nesithsaba se-Monolithic, ibhulorho epheleleyo. Yonke imibala ye-Vita 16.
2. VsmileHappyzir Uhulum Multilayer 700MPA ene-49% ye-translucensy, yenzelwe i-Anterior, isithsaba se-Monolithic, i-Max 3 yeebhulorho. Yonke imibala ye-Vita 16.
3. IVsmileHappyzir SHTML Multilayer 1100MPA ene-45% ye-translucensy, yenzelwe ukujongana nemeko, isithsaba se-Monolithic, iiyunithi zebhulorho zeMax 3. Yonke imibala ye-Vita 16 + iBleach OM1, i-OM2, i-OM3.
4. I-VsmileHappyzir 3D Plus ML Multilayer 600 ukuya kwi-900MPA nge-43% ukuya kwi-49% ye-translucensy, yenzelwe i-Anterior, isithsaba se-Monolithic, iiyunithi ze-Max 3 zebhulorho. Yonke imibala ye-Vita 16 + iBleach OM1, i-OM2, i-OM3 ..
5. I-VsmileHappyzir 3D Plus Pro ML Multilayer 600 ukuya kwi-1050MPA nge-43% ukuya kwi-57% ye-translucensy, yeyokwenza i-Anterior, isithsaba se-Monolithic, ibhulorho ende. Yonke imibala ye-Vita 16 + iBleach OM1, i-OM2, i-OM3 ..
I-PREV: Bhiyozela uSuku lwaBantwana lukaJuni kunye neVsmile Anniversary
OKULANDELAYO : Yilwa i-COVID 2019, Sisebenza!